Blazer ma ọ bụ American? - Ọdịiche na otu esi eyi uwe ọ bụla | Ndị nwoke mara mma
Alicia tomero | 11/06/2022 11:55 | Nlekọta onwe onye, ejiji, Ụdị
Dị ka ya blazer, blazer dị ka jaket, nwere ihe jikọrọ yiri pụtara, ma n'ezie onye ọ bụla nwere otu echiche. Usoro ndị enyerela onye ọ bụla nwere ebumnuche ya, ebe ọ bụ na n'akụkọ ihe mere eme na n'ihi mmalite ha, e mepụtara ihe e ji mara aha nke ha.
Ị ga-ahọrọ n'etiti blazer ma ọ bụ jaket? Kedu ihe dị iche n'etiti ha abụọ? N'ime echiche dị n'elu, anyị nwere ike ịhụ obere nkọwa nke taa anyị nwere ike ịmata na ụlọ ahịa na-enweghị atụ. Ọdịiche dị n'etiti ọgbara ọhụrụ na nke nkịtị, na n'etiti mara mma na iwu.
Anyị maara okwu ahụ jaket dị ka aha ọnyà iji kọwaa blazer ma ọ bụ jaket. Isi mmalite ya sitere na a Ịkwa akwa England omenala, ebe e mesịrị bupu ya na America na aha Americana jikọtara ya na ya.
Ekwesiri iburu n'uche na jaket ahụ bụ okwu e nyere aha abụọ a. Taa ọ dị ka anyị si mara ya, ma amuru na England ebe e mechara bupụ ya imewe ya na America. N'ebe ahụ, a malitere ịrụ ya dị ka uwe pụrụ iche na nke a na-emekarị na ebe a na-enye aha Americana. Ekwesiri ighota na e kere ihe eji eme akwa jaket n'otu ibe.
1 Blazer ma ọ bụ American?
2 Onye America
3 ihe blazer
pụrụ iche Ọ ga-adabere na onye na oge. nke a ga-eji mee ihe. Dịka anyị kwuburu, blazer mara mma nke ukwuu, mana o nwere mmetụ egwuregwu ahụ. Jaketị ahụ mara mma nke ukwuu na ọ ga-adabere na ihe omume ma ọ bụ oge a ga-egosi ya.
Blazer na jaket Ndị a bụ echiche abụọ dịworo kemgbe ọtụtụ afọ, ọ bụ ezie na anyị na-eyi jaket ma ọ bụ blazer mgbe niile. Enwere ike ịchọta nkọwa na ọdịiche dị na ngwa ya na ịkpụ nke ákwà ahụ ma anyị na-akọwa ya n'okpuru ebe a.
Jaketị ahụ bụ uwe mara mma nke ukwuu. A mụrụ ya na England na njedebe nke narị afọ nke XNUMX ma kee ya site n'ịbepụ ọdụ nke uwe mkpuchi frock. N'ụzọ dị otú a, a na-emepụta jaket dị mfe iburu, na-arụ ọrụ karịa na-enweghị atụfu ịdị mma.
Na narị afọ nke XNUMX e kere ya akwa akwa akwa akwa na aha "akwa jaket" na ekele maka aristocratic Beau Brummell (ihe na-esi ísì ụtọ nke Brummell na-ebu ihe odide ya) ejiji ya na-agbasawanye ka ọ na-aghọ akara ngosi ejiji n'oge ahụ.
bekee kwabatara meekwa ka a mara ụdị jaket a. Ha na-eme mgbanwe ụfọdụ, na-ahapụ naanị abụọ n'ime bọtịnụ atọ ahụ na otu oghere ọ nwere na-anọchi anya oghere abụọ ọzọ na-arụ ọrụ n'akụkụ nke ọ bụla nke uwe ahụ.
Na Spain Ụdị jaket a batara narị afọ XIX ma emeworị ya baptizim dị ka jaket America, n'ihi mmalite ya. Ya akwụkwọ ịke guzo pụtara, na otu mbadamba bọtịnụ abụọ gbara ọchịchịrị na obere akpa. Emebere jaket America a ka ọ dabara na uwe ogologo ọkpa wee si otú a mee ka uwe ahụ guzosie ike.
Ọ bụ uwe kacha mma maka mmemme pụrụ iche na nke iwu, dị ka asọmpi ma ọ bụ ememe. Ụdị uwe a dị mma ka ọ na-eyi na bọtịnụ mbụ gbachiri. Ọ bụ ezie na anyị etinyere ya dị ka uwe ejiji iji soro ogologo ọkpa ahụ na na ha na-aga egwuregwu, anyị nwekwara ike iji ya n'otu n'otu na ihe na-adịghị mma, na-ejikọta ya na uwe ogologo ọkpa China ma ọ bụ jeans.
Ọ nwere sitere na ndị agha mmiri site na data a anyị nwere ike kewaa ya na ọ bụ ihe egwuregwu karịa. Ọ mara mma, mana jiri mmetụ nkịtị karịa. Na mmalite ya ka e ji mara ya site na iburu bọtịnụ ọla na obere akpa. Ụfọdụ n’ime ha bu ụdị akara n’akpa ara ma bụrụ ihe e ji ama uwe a ga-eyi n’asọmpi Cricket na England.
Queen Victoria nke England na narị afọ nke XNUMX chọrọ ime jaket, dabere na American, ebe e kere ya na akwa ndị na-eguzogide ọgwụ, na otu ịkpụ na patch akpa. Na ụdị a anyị nwere ike ịhụ na ọ bụ ihe egwuregwu na nke nkịtị.
Na 20, blazers ghọrọ ejiji, ebe ngwakọta ya na uwe ogologo ọkpa na-acha ọcha pụtara. Taa, anyị nwere ike ijikọta ha na uwe ogologo ọ bụla, n'ozuzu ụdị slim, na agba ọ bụla na ọbụna jeans. Ọ nwere ike mepụta anya nkịtị.
Iji kwurịta jaket abụọ a, a ghaghị ịkọwapụta ọtụtụ akụkụ. Ha dị nnọọ mfe nkọwa ebe onye Amerịka na-eme nke ọma, jiri obere bọtịnụ gbara ọchịchịrị na obere akpa. Ọ na-agakarị na uwe ogologo ọkpa. Ka o sina dị, blazer bụ ihe nkịtị, nke nwere akwa na-eguzogide ọgwụ na obere akpa. Ha zuru oke iji ejiji n'ụzọ na-adịghị mma na ha zuru oke na jeans.
Ị nwere ike ịgụ anyị n'akwụkwọ anyị "Echiche iyi uwe 3 ụdị blazer" na na "Otu esi arụpụta onyonyo mara mma na blazers kpochapụwo."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Mụ nwoke Stylish » Nlekọta onwe onye » Blazer ma ọ bụ American?